Famandrihana mini banding fonosana horonan-tsarimihetsika China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Sarimihetsika famoronana tanana,Sarimihetsika Mihetsika Mini Roll Stretch,Andian-tsarimihetsika Miangavy
Home > Products > Sarimihetsika mihetsika > Sarimihetsika mihetsika amin&#39;ny tanana > Famandrihana mini banding fonosana horonan-tsarimihetsika
Mamatotra ireo horonan-tsarimihetsika horonam-baravarankely Mini
Famonon-tànana manenjana ny fampiasana horonantsary mba hamatorana manodidina ny baoritra, paronosy, palety ary fatorana entana kely. Tena azo ekena sy azo averina amin'ny laoniny izy io, amin'izao fotoana izao, ny horonan-tsary mini roll stretch dia safidy toekarena amin'ny kitapo plastika, ankehitriny dia mora tokoa ny mahita azy ao amin'ny fianakaviana, birao ary supermarket. Ny tarika banding stretch dia safidy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa sy entana ara-barotra, manamboatra azy ireo ho anti-maloto, anti-vovoka, anti-hamandoana.
Film Film Transparent Hand Stretch dia Baby horonan-tsary Film, izay filma mety raha toa ka mitady hampidina ny fampiharana na faniriana avo lenta ianao. Ity horonantsary ity dia hakingan-tsarimihetsika avo lenta, horonan-tsarimihetsika miaraka amin'ny haitao avo lenta. Ny endri-javatra fanatsarana sy ny elanelana dia midika fa ny sarimihetsika mini mom dia manome fitaomana indrindra amin'ny vesatra tsy dia mitaky loatra.
● Mahasoa amin'ny toerana na toeram-piasana rehetra
● Tsy misy haingon-doko na tendron-tsoroka toy ny kasety na tariby.
● Vahaolana madinidinika kely
● Miaro amin'ny bibikely, ny vovoka, ny hamandoana ary ny holatra
Sarimihetsika famoronana tanana Sarimihetsika Mihetsika Mini Roll Stretch Andian-tsarimihetsika Miangavy Sarimihetsika famatorana tanana Sarimihetsika famoronana mazava Sarimihetsika fampiasa tanana Sarimihetsika famoronana Pallet Sarimihetsika famoronana horonantsary tanana